किसान महार्‍याली भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न डा. राउतको आग्रह - News Madhesh
जनकपुरधाम, २९ पुष । जनमत पार्टीले आह्वान गरेको किसान महार्‍याली भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष डा. सि के राउतले आग्रह गरेका छन् । प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा भोली (शुक्रवार) आयोेजना हुने महार्‍यालीको सफल बनाउन उनले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
‘विरोधीले फैलाएको भम्रमा नपर्न आग्रह गर्दै’ पार्टीका सचिवालयले– ‘कोरोनाका कारण कार्यक्रम बन्द नगरेको जनाएको छ । किसान आन्दोलनलाई लक्षित गरी प्रहरीले किसानमाथि अवरोध गरेमा, आन्दोलनकारी प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुने जनाएको छ । उक्त कार्यबाट हुने क्षतिको जिम्मेबार नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासन स्वयं नै हुने लेखेका छन् ।
सम्पुर्ण पार्टीले आ–आफ्ना राजनितिक आमसभा, भेला, अधिवेशनलगायतका कार्यक्रमहरु जारी नै राखेको सचिवालयले उल्लेख गरेका छन् । पूर्ण रूपमा लकडाउन नभए तथा विभिन्न राजनितिक पार्टीका कार्यक्रमहरू बन्द नभएसम्म, किसान आन्दोलन जारी रहने पार्टीका केन्द्रिय सदस्य सुरेन्द्र मधेशीले बताए ।